गोंगबु हत्याको सुँइकोसमेत नपाएकी किशोरी थुनामा, भन्छिन्- फोहोर भनेकाले सुटकेस धकेलेकी हुँ, लाश छ भन्ने थाहा थिएन
गोंगबु हत्याको सुँइकोसमेत नपाएकी किशोरी थुनामा, भन्छिन्- फोहोर भनेकाले सुटकेस धकेलेकी हुँ, लाश छ भन्ने थाहा थिएन एम्बुलेन्समै सुनाएकी थिइन् कल्पनाले गोंगबु हत्याको कहानी
नारायण अधिकारी मंगलबार, भदौ २३, २०७७, १४:११
हत्यामा संलग्न कल्पना मुडभरी। फाइल तस्बिर
काठमाडौं-टोखा नगरपालिका-१० स्वर्गद्वारी गोंगबुमा ४५ वर्षीय कृष्णबहादुर बोहोराको हत्या कल्पना मुडभरीले गर्छिन्। स्लिपिङ ट्याबलेट खुवाउनेदेखि ह्याम्मरले अण्डकोषमा हानेर हत्या गर्ने, हत्यापछि शव टुक्रा–टुक्रा पार्ने काम कल्पना एक्लैले गर्छिन्।
कल्पनाले यो सब गरिरहँदा उनकी नाबालक छोरी भने अर्को कोठामा सुतिरहेकी हुन्छिन्। हत्या गरेर फालिएको शव भोलिपल्ट अर्थात् साउन २५ गते प्रहरीले बरामद गर्छ। त्यसपछि चितवनबाट कल्पना र उनकी नाबालक छोरी पक्राउ पर्छिन्। कल्पनालाई जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि जेल चलान गर्ने आदेश दिन्छ भने उनकी नाबालक छोरीलाई समेत अदालतले रिहा गर्ने आदेश दिँदैन।
बोहरालाई स्लिपिङ ट्याब्लेट खुवाउँदा, हत्या गर्दा र हत्यापछि शव टुक्रा–टुक्रा पार्दासमेत कुनै पनि काममा संलग्न नभएकी उनकी नाबालक छोरी किन सुधार गृहमा गइन्? उक्त हत्यामा नाबालक छोरीको के संलग्नता छ?
घटनाका बारेमा उनै कल्पनाकी नाबालक छोरीले प्रहरीमा दिएको बयान भने यस्तो छ।
'आमाले फोहर फाल्न जाउँ भनेपछि गएकी हुँ'
म, आमा र भाइ टोखा नगरपालिका १० नवज्योति मार्गस्थित किरणकुमार बस्नेतको घरमा २०७२ सालदेखि कोठा भाडामा बस्दै आएका थियौं। बुवा कहिलेकाहीँ कोठामा आउनुहुन्थ्यो।
कृष्णबहादुर बोहोरा घटना हुनुभन्दा २ दिन अगाडि बिहान अन्दाजी साढे ७ बजेको समयमा आई तुरुन्तै फर्किई जानुभएको थियो। साउन २४ गते कृष्णबहादुर बोहोरा हाम्रो कोठामा रुस्लान भोड्का लेखिएको बोत्तल लिई दिउँसो अन्दाजी साढे ४ बजे कोठामा आउनु भएको थियो।
उक्त समयमा म र भाई एटेच रुममा बसी गफ गरिरहेका थियौं। आमा किचनमा कुखुराको मासु पकाउँदै हुनुहुन्थ्यो। त्यहीबेला कृष्णबहादुर कोठाभित्र आई सोही एटेच रुममा बसी साथमा ल्याएको रुस्लान भोड्का गिलासमा हालेर पिउँदै थिए।
चिप्स, काँक्रो पनि उनी आफैं ल्याएका थिए। मेरो आमाले कृष्णबहादुर र हामीलाई किचनबाट मासु, चिउरा दिई हामी सबैजना भई सँगै खाएको हो। कृष्णबहादुर बोहोराले खाने क्रममा जथाभावी बोल्दै गरेका थिए। मेरो भाइ आफ्नो खाना लिई टिभी रुममा गयो। मेरो आमा कल्पना मुडभरी पनि किचनतिर जानु भयो। त्यतिखेरमै कृष्णबहादुर बोहोरालाई यति रातिसम्म किन बसेकोभन्दा वादविवाद भइरहेको अवस्थामा मेरो ममी आई मलाई टिभी रुममा टिभी हेरी बस भनेर पठाइदिनु भयो।
म टिभी रुममा गएर सुतेँ। मेरो आमाले २/४ दिन अगाडिदेखि नै चितवन जानुपर्छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। घटना भएको दिन रातको पौने ३ बजेतिर आमा म सुतेको कोठामा आई फोहर फाल्न जानु छ, छिटो उठ भनी उठाउनुभयो। रातको समयमा ममीले मलाई किन उठाउनु भयो भनेर सोध्दा म एक्लै भएकाले, फोहर फाल्न जाउँ भनेर भन्नुभयो। त्यसपछि म उठेँ।
आमा र मसमेत एटेच रुममा गई बाथरुमभित्र भएको सुटकेसमा ममीले नाम्लो लगाइसकेपछि धकेल्देउ भनेकाले मैले सुटकेस धकेलेकी थिएँ। ममीले सुटकेस बोक्नुभयो। बाहिर पानी परेको रहेछ, छाता ओढाउन हिँड भनेर ममीले भन्नुभयो। मैले आमालाई छाता ओढाएँ। त्यसपछि कोठाभन्दा पश्चिमतर्फ केही परसम्म पुगी टोखा नगरपालिका १० नवज्योति मार्ग सडक किनारामा लगी ममीले बोकेको सुटकेस फाली कोठामा हामी दुवै जना आमाछोरी आयौं। म मेरो कोठामा गएर सुतेँ।
भोलिपल्ट मात्रै उक्त सुटकेसमा राति हाम्रो कोठामा आएको कृष्णबहादुर बोहराको लास रहेछ भन्ने जानकारी भएको हो। उनको हत्या गर्ने योजना आमा कल्पना मुडभरीले नै बनाउनु भएको हो। मैले आमालाई कृष्णबहादुर बोहोराको लास रहेको सुटकेस धकेलीदिई बोक्न लगाई बाहिर पानी परी रहेकाले आमालाई छाता ओढाई सडक किनारामा लगी लास रहेको सुटकेस फालेको हो। तर त्यसबेला सुटकेसमा लाश थियो भन्ने मलाई थाहा थिएन।
साउन २५ गते बेलुका अन्दाजी साढे ७ बजेतिर आमाले चितवनको ना ५ च १९८७ नम्वरको एम्बुलेन्स बोलाउनु भएको रहेछ। एम्बुलेन्स आएपछि म, मेरो आमा कल्पना मुडभरी र भाइसमेत एम्बुलेन्समा बसी चितवन मामाघरमा पुगी बसिरहेको अवस्थामा साउन २६ गते साँझ प्रहरीले म समेतलाई पक्राउ गरेको हो।
चितवन जाँदा कल्पना भन्थिन्- गोंगबुमा मान्छे मारेको रैछ डर लाग्यो, मुड फ्रेस गर्न हिँडको
बोहराको हत्यापछि एम्बुलेन्समार्फ्त छोराछोरी लिएर कल्पना चितवन पुगेकी थिइन्। उनलाई काठमाडौंबाट चितवनसम्म लैजाने एम्बुलेन्सका चालक उमाकान्त तिमिल्सिनासँग पनि प्रहरीले बयान लिएको थियो। बयानका क्रममा चालक तिमिल्सिनाले कल्पनाले गोंगबुमा मान्छे मारेको घटना सुनाएको बताएका छन्।
बोहोराको हत्या गरेलगत्तै साउन २४ गते राति साढे १० बजेतिर कल्पनाले उमाकान्तलाई आत्तिँदै फोन गरेर भनेकी थिइन्, ‘मलाई जरुरी छ, चितवन जानुछ। मलाई लिन आउनु।’
उमाकान्त त्यस रात काठमाडौं आएनन्।
साउन २५ गते भरतपुरबाट बिरामी लिएर उमाकान्त काठमाडौं आए। फर्किने बेलामा अघिल्लो दिन नै चितवन जानुछ भनेकी कल्पनालाई उमाकान्तले सम्पर्क गरे। त्यसपछि उनैले दिएको लोकसन अनुसार उमाकान्त एम्बुलेन्स लिएर गोंगबु पुगे। कल्पना छोराछोरी लिएर आइन्। साँझको साढे ७ बजेतिर उनीहरु काठमाडौंबाट चितवनतर्फ लागे।
‘एम्बुलेन्समा चितवन जाने क्रममा कल्पना मुडभरीलाई मैले हिजो किन आत्तिदै फोन गर्नुभएको भनेर सोधेँ। कल्पनाले साउन २४ गते राति गोंगबुमा एक पुरुषको हत्या भएको, त्यसबाट मेरो छोराछोरी डराए, म पनि बिरामी भएकाले केही दिन आराम गर्न जान लागेको भनी बताइन्’ उमाकान्तको बयानमा उल्लेख छ।
हेल्मेट काण्डबाट उघ्रिएको राधेको अपराधको बर्को अझै यथावत, आपराधिक रजगजलाई कांग्रेसको साथ
असई र प्रहरी जवानको हत्या आरोपमा पक्राउ परेका ७ जना सार्वजनिक पक्राउ पर्नेमा धनगढी उपमहानगरपालिका-१० का ३१ वर्षीय पंकु भनिने रोहित राना, २० वर्षीय राजेन्द्र राना, ३० वर्षीय चोर भनिने सुरेश राना,... मंगलबार, कात्तिक ४, २०७७
अपरेसन रिचार्ज कार्ड : यसरी पुग्यो चोरीको गिरोहसम्म प्रहरी प्रहरीले रिचार्ज गरेर फालेको कार्ड भुँइबाट उठायो । र, सुरु गर्‍यो ‘अपरेशन रिचार्ज कार्ड।’ रिचार्ज गरेर फालिएको कार्डबाट सुरु भएको अन... मंगलबार, कात्तिक ४, २०७७
असई हत्या प्रकरण : जवान साउदको पनि शव भेटियो, तस्करको सामूहिक आक्रमणमा परेको प्रहरी प्रारम्भिक अनुसन्धान शनिबार राति गस्तीमा गएको बेलादेखि बेपत्ता भएका प्रहरी जवान रामबहादुर साउद पनि मृत भेटिएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालयका... मंगलबार, कात्तिक ४, २०७७
काठमाडौंका बालगृहमा अलपत्र ११ बालबालिकाको उद्धार बुधबार, कात्तिक ५, २०७७